Italian wokuxubha Marvis iphathelene dentifrice okhokhelwayo. It senziwa ngokusho izindlela ezindala usebenzisa izinga okusezingeni eliphezulu izinto zokusetshenziswa. Izindleko isilinganiso sama-ruble 350 e 25 ml. Naphezu amanani aphezulu, izimpahla bayindlala kakhulu.
Marvis inkampani eladabuka 1908 e-Italy. Sekungaphezu kwekhulu leminyaka liye esikhiqiza toothpastes, okuncike zokupheka lasendulo akhiwa kubanikazi abasunguli lenkampani - Martelli umndeni. Phakathi nalesi sikhathi,-range yomkhiqizo abe omkhulu.
"Marvis" - i wokuxubha okukhethekile, ne ezihlukahlukene zalo ububanzi flavour kanye ako. It utfolakala kuluhlobo okunethezeka. Ngaphandle - ngamapayipi amancane. Ungakwazi ukuthenga ke ezitolo yezimonyo, ukunethezeka beauty salon kanye nemitholampilo kwamazinyo.
Izakhiwo kanye nezici
Umsebenzisi ngamunye uyakwazi ukhetha inketho ofanelekile wokuxubha Marvis. Nohlu olubanzi kuyivumela. Le mfundiso eyasungulwa ethi ngayinye unama ihlolwe amashumi eminyaka. Yingakho kuthandwa kakhulu phakathi abathengi emhlabeni wonke.
Marvis - wokuxubha, okuyinto kunezinzuzo eziningi:
ngeke kuyilimaze koqweqwe lwawo, ngoba lichaza ekwakheni ketshezi abobunjwa ezithambile;
izithako wokuxubha kusukela "Marvis" kahle ukuhlanza ebusweni namazinyo epha mhlophe zemvelo;
Liqukethe izingxenye ekhethekile, ukuze usize ekulweni namagciwane ziyingozi ngalo ingaphakathi ngomlomo;
ukusetshenziswa njalo Marvis kusho freshens umoya, kuqinisa koqweqwe lwawo namazinyo zibe mhlophe;
tube has usayizi encane, kodwa ngisho lokhu inani kwanele isikhathi eside;
emaphaketheni eyenziwe retrostile ukuthi ayimkhangi.
Marvis - Toothpaste senzelwe ukunakekelwa temlomo nsuku zonke. Ngalo, inqubo isimiso uthatha zonke injabulo enkulu. Ngesisekelo nokunamathisela ngamunye - ukunambitheka minty, okuyinto ngamunye samuntu esithile kuhlangene nezinye ukunambitheka.
Namuhla kukhona 2 ongakhetha iphakethe unamathisele kusuka "Marvis":
75 ml tube standard;
okufushane ukujabulela 25 ml.
Ngokuqondene izici ukunambitheka, umenzi ukhiqiza:
Classic Mint unamathisele, onikeza freshness usuku lonke.
Kulabo abafuna ukwenza ukumamatheka kwakho ezimhlophe. Lesi isici esikhethekile Marvis - Toothpaste mhlophe, ephinde enephunga minty.
With the kwalokho jasmine.
With Amacebo ebuhlungu licorice.
Abathengi ugcizelele okhethekile amakhorali umphumela omuthi wokuxubha. With ukusetshenziswa esihleliwe umkhiqizo kuba lubonakale ngemva kwezinyanga ezimbili kuya kwezintathu. It yakhiwa Abrasives obucayi, ungashiyi imihuzuko futhi kwadala umonakalo koqweqwe lwawo. Izindleko tube esezingeni kuyoba mayelana 75 ml ruble 800.
Marvis - Toothpaste: Izibuyekezo
Ukuze inhlanzeko amaningi adluliselwe ngomlomo kubaluleke kakhulu. Into eyinhloko ukuba ukuxubha amazinyo abo ngokufanele. Kubalulekile ukukhetha wokuxubha ezinhle. Kuthinta impilo yomlomo kanye ukuphefumula fresh. Izigidi zabantu emhlabeni wonke uthanda Marvis kusho. Toothpaste akanalo nje siliphunga elimnandi, kodwa futhi kakhulu izakhiwo zokwelapha kanye prophylactic.
Okuwukuphela ethile sina, lapho uthi ayinhlama abathandi Marvis - lena intengo zemikhiqizo. Kuyinto ngempela eliphezulu. Nokho, wonke amanye izinzuzo zaleli yokuntuleka ukugqagqana. Kunenye "lokususa". Thenga nokunamathisela Ngeke zonke esitolo. Ngesisekelo uhla esitolo kule ingxenye elalihlala imikhiqizo zamanani aphansi. Ukucinga le nto ku okukhethekile yezimonyo neminyango ukuthi ngokukhethekile imikhiqizo Ayurvedic nezobuchwepheshe.
Abathengi izibuyekezo zabo bathi izinto ezilandelayo ezinhle "Marvis" wokuxubha:
Isakhiwo omangalisayo. Phakathi izithako kuphela kungase kutholakale, esebenza kahle kakhulu izingxenye eliphezulu. Esikhundleni kokulimaza ukunambitheka based izimali - ezikhishwe of peppermint amakhambi.
namathisela ngalinye ethize kusukela Marvis has ukuphulukisa alo izakhiwo. Ngokwesibonelo, uphephamente is zihlukaniswa amandla ako mhlophe. nesinamoni Okuhlukile kunomphumela sokuphulukiswa, kunciphisa gum ukopha.
Noma yimuphi umuthi wokuxubha Marvis ku sha freshens umoya ngokusebenzisa Mint flavour.
Womkhiqizo esivumelana kakhulu futhi ezihlangene.
Marvis - Toothpaste, okuyinto belulekwa eziningi abantu, kokuphawula ukuthi has izinga okusezingeni eliphezulu ngempela. Ngakho-ke, naphezu amanani aphezulu (ruble 300 ngalinye 25 ml), kodwa njalo kuyaziwa hhayi kuphela e-Europe kodwa futhi kwamanye amazwe emhlabeni. Izimali ezivela "Marvis" izinkampani ezazidingeka ngisho iminyaka engu-100 edlule. Kulindeleke ukuthi esikhathini esizayo, imikhiqizo wadala ezindala zokupheka efakazelwe abantu bahlale bemazi.